Nagu saabsan - Divenland
Shirkad kiimiko xirfadlayaal ah oo ku takhasustay budada dib loodaadin karo (RDP) iyo hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), wakiilka yaraynta biyaha iyo wiilka on. In kabadan 10 sano oo khibrad ah oo ku saabsan soosaarka badeecadahan iyo soo saaristooda, Divenland waxay ku siin doontaa adeegyo farsamo profesdstional ah. Iyada oo ay taageerayaan adeegyada suuqgeynta farsamada, Divenland sidoo kale waa mid ka mid ah shirkadaha casriga ah ee casriga ah, kuwaas oo sameeyay wax soo saar iyo qaab dhismeedka adeegga, oo daboolaya agabyada dhismaha ee budada ah iyo agabyada cusub ee dhismaha, iyagoo siinaya takhasus gaar ah, isku dhafan iyo soo saarid agab adeeg iyo adeegyo dabagal ah soosaarayaasha hoose.
In kasta oo had iyo jeer la hagaajiyo tayada waxsoosaarka iyo ballaarinta awoodda si loo daboolo baahiyaha wax soo saarka ee macaamiishooda, Divenland waxay sidoo kale ku faraxsan tahay inay sameyso OEM sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha, si ay u bixiso adeegyo taageera shirkadaha kale ama ganacsatada .Divenland ma ahan xalkaaga kaliya, Waxaanse leenahay dhaqankeenna iyo falsafadeena gaarka ah, waana qiimeynaynaa waana hirgelinaynaa falsafada. Qaadashada tayada waa mid ka mid ah qiimayaasheena asaasiga ah. Marka laga hadlayo macaamiisha sidii lammaaneheenu waa mid ka mid ah mabda'deena. Waxaan bixinnaa isgaarsiin wanaagsan, waxaan bixinaa alaabo tayo sare leh iyo xalal aan fiicnayn. Iskaashi la samee Divenland, waxaan kaa caawin doonaa inaad xulashada ugu fiican ka sameysid alaabta ceeriin oo leh qiime fiican.
Sababta ay shirkado badani doortaan
DIVENLAND lix faa iidooyin
XARUNTA CARGO STORAGE
Waxaan iskaashi la sameynay macmiil badan oo dhinacyo badan leh, kumanaan macaamiil ah ayaa goob joog ka ahaa inaan sii wadnay heer sare oo is-weydaarsi farsamo iyo iskaashi aan la sameynay jaamacadaha muhiimka ah ee guriga iyo dibedda sanadihii la soo dhaafay, teknoolojiyadeenna weligeedba way ka horreysay warshadaha.
2. Awoodda kaydinta
Iyada oo noocyo kaladuwan oo dhameystiran iyo keyd ku filan, awood iskaashi oo xoog leh oo saadka iyo wareejinta gaarsiinta degdegga ah, waxaan ku hubin karnaa in waqtiga la keeno.
Waxaan leenahay qaabeyn heer sare ah shaybaarka arjiga wax soo saarka, oo leh dhowr koox khibrad tiknoolajiyadeed, oo diiradda saaraya cilmi baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub iyo meelaha cusub ee tikniyoolajiyadda dalabka.
Adeeggu keli kuma caawin karo macaamiisha inay ka baaraandegaan sheyga la dhammeystiray ee ku saabsan dhismaha dhibaatada, laakiin sidoo kale waxay aqbali karaan badeecada macmiilka dhammeystiran inay u dirto saamiyo si ay u falanqeeyaan, u ogaadaan dhibaatada iyo xallinta dhibaatada.
Fikradda aasaasiga ah ee shirkaddu waa "tayada iyo teknolojiyadda", qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee caanka ah iyo dhoofinta guryaha ayaa doorta inay iskaashi yeeshaan, aaminaan.
6.Awood la fahmi karo
HAL XAL JOOJI
Diirada saarida aaladaha qalabka dhismaha ee budada qalalan xalalka, dhis nidaam tayo sare leh is-xakameyn wax soo saar, hubinta tayada wax soo saarka, oo ay ka go'an tahay abuurista sumcad caan ah.